Serivisy Plex.Earth 3.0 Load WMS avy amin'ny AutoCAD - Geofumadas
Plex.Earth 3.0 Manasa WMS amin'ny AutoCAD
Oktobra, 2012 AutoCAD-Autodesk, Google Earth / Maps
Plex.Earth 3.0, izay nanam-potoana nanandrana ny famaritana ny daty mety amin'ny endriny farany, dia tonga tamiko. Mety amin'ny volana Novambra amin'ny 2012.
Mihazakazaha amin'ny AutoCAD 2013
Angamba ny tena tantara dia ity dika natao manokana ho AutoCAD 2013, na misy ny dikan-mitsangana (Sivily 3D 2013, 2013 AutoCAD Map, sns)
Izany no zava-dehibe ny milaza, araka ny dikan-ity Autodesk avy mitondra kilemaina ny fahafahana manafatra Sivily 3D Google Earth sary nomerika sy ny modely, fifanarahana izay nihazakazaka fahaizana nanao dikan-Plex.Earth in teo aloha, tahaka ny niresahako momba io andro io Niresaka momba ny olana raha tsy ara-dalàna izany na tsia.
Hatramin'ity kinova ity, PlexScape dia manana fifanarahana manokana amin'i Google hahafahany manafatra ny sary, mandrindra, manafatra ny takelaka ary ny tsipika contour. Raha ny AutoCAD Civil 3D 2013 dia tsy manolotra an'izany intsony, na dia sary goavambe aza izy io ary misy famahana kely dia kely.
Fanohanana ireo tolotra WMS
Ity takelaka ity dia mitondra ny tablette Plex.Earth - Sarintany Map, ny safidy hametrahana tolotra tamba-tserasera, mahaliana indrindra satria hatramin'izao dia tsy misy olona mampiasa AutoCAD hanandrana an'izany izay manao ny Civil 3D ihany.
Tadidiko fa tamin'ny andiany teo aloha ny nataoko dia nampiditra ny WMS tao amin'ny Google, raha nanohana azy io ary avy teo no nanafako ilay sary. Ankehitriny ny serivisy dia azo tadiavina amin'ny url mivantana na amin'ny faritra misy azy. Mahaliana izany, satria afaka misafidy ireo sosona azo aseho ianao amin'ny sary manaraka.
Izy io koa dia azo tehirizina ho xml ao anaty rakitra fanitarana pxmap, ary araka ny aseho dia jereo ity tranga ity, izay hamaritana ny sosona ambony indrindra PNOA sy Cadastral Cartography sosona IDE Espaniôla. Avy eo azo antsoina ny rakitra ary efa voalamina ny sosona.
Rehefa mamaritra ny asa fanompoana ao amin'ny fampiasana, dia afaka nanafatra iray na sary, kapila tanimanga na tsy ara-dalàna marolafy rafitsary karazana toy ny nataontsika ny Google Earth. Ireto misy fitaovana hanakanana ny sisin'ny sary iray na hampiarahana maromaro ho iray.
Ny tsara indrindra dia afaka mikaroka sarintany misy isam-pirenena ianao. Tena tiako ity hevitra ity, satria izy io dia mitarika ny mpampiasa AutoCAD mahazatra, izay tsy manam-pahaizana GIS fa mpanao drafitra, izay tsy manantena hahafantatra betsaka momba ny IDE, fa kosa maka sary ambadika ho an'ny asa novolavolainy. Ka ny fahaizan'ireo mpamorona Greek Plex.Earth ireo dia manamora ny vahaolana:
Aiza ianao? Ity ny sarintany itondrany azy!
Fametrahana ny Ribbon
Ny fampiasa eo amin'ny tontolon'ny kofehy sy ny tontonana fampisehoana dia nohatsaraina tokoa. Ny fitaovana izay fantatray taloha dia tao amin'ny takelaka faharoa: Plex.Earth - Google EarthAiza famoahana safidy avy amin'ny AutoCAD ny Google Earth, tiled sary Import, marolafy na ny lalana sy ny mamorona modely nomerika sy ny isam-ponina avy amin'ny Google Earth contour ho AutoCAD ireo.
Tao amin'ny takelaka fahatelo Plex.Earth - Extensions, aiza ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanodinana ny sary, ny famoronana eo ambonin'ny tany ary ny fampivoarana ny fampivoarana amin'ny fampiasana ny serivisy WS amin'ny zavatra azonao jerena ao amin'ny Google Maps coordinates mampiasa ny rafitra rehetra ny fandrindrana ny tontolo.
Raha fintinina, dia toa lehibe dingana fampidirana Plex.Earth Web Services Map, izay nanampy ny synchronize amin'ny Google Earth sary maneho lafin-javatra izay AutoCAD tsy manana kosa, ary azo inoana fa tsy ho amin'ny fotoana fohy.
Manamafy izay nolazaiko taloha, rehefa nahita aho voalohany indrindra Plex.Earth: Mahagaga ny fahatsoran'ny vahaolana avy amin'ireto namana ireto:
Te hanana ny sary google Earth ao amin'ny AutoCAD? Indro Ilay izy
Amin'ny vahaolana avo lenta? Azo antoka, nohamafisiny
Amin'ny làlambe iray? Mandrosoa, ampidino izy io ho buffer ambonin'ny hazo
Ny fiolahana ambaratonga? Ary koa
Ankehitriny dia ny fanompoana sari-tany.
Previous Post«Previous Ny GeoConverter dia miditra ao CONDOR
Next Post Sampan-draharahan'ny Station Station Sokkia 50, amin'ny teny Espaniôlamanaraka »
8 Mamaly ny "Plex.Earth 3.0 Manisy serivisy WMS avy amin'ny AutoCAD"
topo.ejroca hoy izy:
Martsa, 2014 ao
inona ny olana ???
mametraka ny plex.earth amin'ny 3d sivily sy reinstall ho 3 fotoana sy ny sivily manomboka mahita fa mamonjy ny Module ny plexearth saingy hitako tsy kiheba, na contextual sakafo ary tsy misy scotch na ny amin'ny plex.
Voamariko avokoa ny sehatry ny sivily rehetra.
Inona no mety hitranga ???
misaotra x valiny
Novambra, 2012 at
Diso, tsy misy torolàlana amin'ny teny Espaniola. Saingy misy lahatsary ao amin'ny Youtube misy ireo zavatra samihafa izay nataon'i Plex.Earth
Alberto Rodriguez hoy izy:
Tena mahaliana sy mahasoa ity fitaovana ity, efa nanandrana izany aho saingy tiako ho fantatra
Misy ny torolàlana amin'ny teny espaniola ho fampiasana sy fampiharana azy
Raha toa ka midika hoe modely terrain nomerika sy curve nivesl ianao, eny. Ny Plex.Earth dia miasa amin'ny dikan-teny mahazatra an'ny AutoCAD ary manome anao fahaizana miasa izay mety ho vita amin'ny Civil3D ihany, toy ny fanafarana ny fiakarana haingam-pandeha, famoronana contours, sns.
Antonio hoy izy:
misaotra anao Manana fanontaniana aho miaraka amin'ny modely plex. Ny tany izay azoko entina manondrana rasako tsy manana ny sivilizasiona sivily satria manana ny autocad tsotra
Tsy mbola azo alaina io dikan-dalàna io. Mety amin'ny faran'ny volana Novambra izao.
Ny fanadihadihana nataoko dia momba ny dikan-teny Beta izay nomeny.
I misalasala izay Afaka maka ny 3.0 vercion fandaharana io, satria ao amin'ny vohikala ofisialy misy afa-tsy 2.5 vercion ary raha efa izany no afaka hanome ahy tsara misaotra mialoha